Home Wararka Puntland oo shaacisay doorashada qaybtii ugu horreysay kuraasta Boosaaso
Puntland oo shaacisay doorashada qaybtii ugu horreysay kuraasta Boosaaso
Guddiga SEIT ee Puntland ayaa shaaciyey qayb ka mid ah kuraastii ugu horreeyey ee ay deegaan doorashadoodu tahay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, kuwaas oo doorashadooda la qabanayo maalmaha soo socda.
Guddiga ayaa soo saaray liiska 16 kursi oo kala ah:-Hop#220, Hop#169, Hop#076, Hop#149, Hop#157, Hop#142, Hop#227, Hop#190, Hop#228, Hop#234, Hop#273, Hop#083, Hop#222, Hop#036, Hop#027 & Hop#158.
Sidoo kale warqadda kasoo baxday guddiga ayaa lagu sheegay in jadwalka doorashada kuraastan iyo sida ay u kala horreeyey ay dib ka faah faahin doonaan.
Tallaabadan ayaa qayb ka ah fulinta heshiiskii doorashooyinka ee lagu gaaray magaalada Muqdisho, sida uu shaaca ka qaaday guddiga SEIT ee Puntland.
Yaa ku fadhiyey kuraastan 16-ka ah ee la shaaciyey?
1-Hop#220 waxaa ku fadhiyey Cabdirashiid Maxamuud Xasan Cabdi.
2-Hop#169 waxaa ku fadhiyey Wasiirka Wasaaradda qorsheynta Jamaal Maxamed Xasan.
3-Hop#076 waxaa ku fadhiyey Muuse Axmed Ismaaciil.
4-Hop#149 waxaa ku fadhiyey Axmed Ismaaciil Maxamed.
5-Hop#157 waxaa ku fadhiyey Maxamed Cabdullaahi Xasan.
6-Hop#142 waxaa ku fadhiyey Wasiiru dowlaha Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya Maxamuud Xayir Ibraahim.
7-Hop#227 waxaa ku fadhiyey Cabdicasiis Maxamed Maxamuud (QAMBI).
8-Hop#190 waxaa ku fadhiyey Wasiir kuxigeenkii hore ee Wasaaradda Amniga Soomaaliya Cabdinaasir Saciid Muuse.
9-Hop#228 waxaa ku fadhiyey Maxamuud Axmed Ciise Maas.
10-Hop#234 waxaa ku fadhisay Deeqo Saciid Xasan.
11-Hop#273 waxaa ku fadhiyey Cabdi Maxamed Maxmuud (Cabdiyare).
12-Hop#083 waxaa ku fadhiyey Cabdullaahi Bille Nuur.
13-Hop#222 waxaa ku fadhiyey Cumar Ismaaciil Waaberi.
14-Hop#036 waxaa ku fadhiyey Sakariye Maxamuud Xaaji Cabdi.
15-Hop#027 waxaa ku fadhiyey Wasiirka Beeraha & Waraabka ee Xukuumadda Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid.
16-Hop#158 waxaa ku fadhiyey Wasiir kuxigeenkii hore ee Wasaaradda Gargaarka, maareynta iyo musiibooyinka Cumar Cilmi Cumar (Ceysane).
Boosaaso ayaa ka mid ah magaalooyinka sida weyn isha loogu hayo, isla-markaana ay caqabadda ka jirtay, waana deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka Puntland.
Previous articleHaramcad oo jirdil ugeystay Qaar kamid Warfidiyeeno ku sugnaa Degmada Kaxda.
Next articleCiidankii loo qaaday Eritrea oo Muqdisho ku soo wajahan
Somaliland oo digniin culus dul dhigtay Beesha Caalamka
(XOG) Ganacsato Shiikh Sharif ka gudbisay dacwad $12 Malyan deyn ay...